Maxaa Iska Badala Caqliga Dadka Karoona Ka Bogsaday? | Xaqiiqonews
Maxaa Iska Badala Caqliga Dadka Karoona Ka Bogsaday?
Saynisyahano ku sugan London iyo jaamacada Kaambariij (Cambridge University) ayaa shaaca ka qaaday hoos u dhac weyn oo ku yimaada caqliga iyo garaadka dadka ka caafimaaday Karoona Fayrus.
XAQIIQO NEWS – CAAFIMAAD
Baaritaanada ka soo baxay cilmi baaristan ayaa lagu baahiyey majaladda Caafimaadka wax ka qorta ee Laanset (The Lancet), waxaana tijaabada ka qeyb qaatay 81,337 qof, dadkaasi oo 12,689 qof oo ka mid ay ahaayeen dad la soo xanuunsaday Karoona heerarkiisa kala duwan.
Tijaabada ayaa aheyd “Shaqo qabasho” looga gol lahaa in lagu ogaado heer garaadka garashada, natiijada ayaa muujisay dadka xanuunka karoonaha uu ku dhacay – oo ay ku jiraan xitaa dadkii caalamadahooda fududaayeen- in ay qabaan mushkilo ka heysta shaqo qabashada marka loo barbardhigo kuwa uusan Fayruska asiibin.
Sidoo Kale Aqri: Ogow Nooca Caqliga Ee Canugaada..Afar Nooc Oo Caqli Ah
Heerka hoos u dhaca garaadka ayaa sida la sheegay ku xirneed heerka cudurka, waxaana la ogaaday in dadkii u baahday qalabka neefsiga uu hoos u dhacay garaadkooda 7 dhibcood.
Goor sii horeysay Khubarro Bayoolaji oo ka socday isbitaalka jaamacadda Shaartii (Charité University) ee ku taala jarmalka ayaa ogaaday in Fayruska karoona uu galo maskaxda bani’aadamiga isaga oo sii maraya neerfayaasha uriska, taasi oo dhib u geysaneysa neerfayaasha waxaana ka dhalanaya madax xanuun, daal iyo dhibaatooyin kale oo maskaxda ku yimaada.